WAAYIHII WARSAME Q31AAD W/Q: Cali M Diini | Laashin iyo Hal-abuur
WAAYIHII WARSAME Q31AAD W/Q: Cali M Diini
WAAYIHII WARSAME Q31AAD
Warsame markii uu Nairobi ku soo noqday ku ma uusan noqon dukaankii qoyska Idil ee bil kadib soo noqoshadiisi waxa uu shaqo ka helay mid ka mid ah xawaaladaha soomaalida ee Nairobi deggan waxa uu na sii watay barashaddii Afafka Sawaaxiliga iyo Ingiriisiga oo uu habeenkii baran jiray.
Lix bilood kadib Warsame waxa uu u diyaargaroobay in uu Idil u geedfariisto oo reer unko. Warsame iyo Idil waxa ay ku heshiiyeen in Idil marka hore aabbe iyo hooyo u sheegto in ay Warsame isguursanayaan uu na soo doonan rabo. Idil goor habeennimo ah ayay aabbeheed Xaaji Doolaal iyo hooyadeed Caasho kulan gaar ku la qaadatay qolka fadhiga ee gurigooda waxa ay na u sheegtay in Warsame reerka u soo socdo balse jawaabtii ay aabbeheed Xaaji Doolaal kala kulantay Idil waxa ay ku noqotay la ma filaan. Xaaji Doolaal si caro leh ayuu u yiri, “Ma wiilkaas miskiinka ah oo saboolka ah ayaad adiga oo gabar waxbaratay ah guursanaysaa? Maya taasi ma dhacayso.” “Aabbe Warsame sow wiil soomaaliyeed ma ahan? Sow ma ahan wiilka aad wanaaggiisa iyo ammaanadiisa aad taqaanid oo aad ku ammaani jirtay? Maxay tahay sababta uusan iigu qalmin? Midda kale Warsame asaguba waa nin waxbaratay oo aniga iga aqoon badan,” ayay Idil aabbeheed ku tiri. Xaaji Doolaal waxa uu ku dooday in reerka Warsame ka dhashay iyo reerkoodu aysan isguursan. Idil waxa ay ku adkaysatay in Warsame ay jeceshahay asna jecel yahay sidaas darteed aysan guursanayn nin aan asaga ahayn. Maamo Caasho oo intii hore oo dhan aamusnayd ayaa Xaaji Doolaal ku tiri “Xaaji, Warsame waa wiil wanaagsan oo aan si fiican u aqaanno ee gabadha ku dar wiilka.” Xaaji Doolaal waa uu diiday habeenkiina sidaas ayaa lagu kala seexday.
Idil u ma aysan sheegin Warsame warka ay aabbeheed kala kulantay waxa ay ka baqday in Warsame ku yiraahdo haddii aabbahaa ii kaa diiday wax kale ma samayn karno ee macsalaama.
Warsame odayaal ay isku reer yihiin ayuu u tagay oo ka codsaday in Idil loo doono. Odayaasha mid ka mid ah oo Xaaji Doolaal garanayay ayaa Xaajiga wacay u na sheegay in uu dan ka leeyahay guriga na ugu imaan doono salaadda ceshe kadib.
Salaaddii ceshe kadib ayaa Warsame iyo labo oday oo ku reer ahi yimaadeen guriga Xaaji Doolaal. Isnabdin dabadeed odaygii horay Xaajiga u la ballamay ayaa hadalkii furay sheegayna in ay u socdeen arrin soo jireen ah oo ay doonayaan Idil Xaaji Doolaal u na doonayaan Warsame Faarax. Xaaji Doolaal si aan leexleexad lahayn ayuu odayaashii iyo Warsame ugu sheegay in uusan Idil siinayn Warsame aysanna ahayn arrin uu ka sugayay in ay ugu yimaadaan maadaama beeshiisa iyo beeshoodu aysan iska guursan. Odayaashii waxa ay Xaaji doolaal u tiriyeen tobannaan gabdhood oo reerkooda ah oo ay qabaan niman Xaaji Doolaal ku reer ahi. Markii hadalkii ka taagtaagmay ayuu Xaaji Doolaal ku dooday in uu Idil nin kale siiyay bil ka hor. Odayaashii iyo Warsame oo caro la karkaraya ayaa gurigii isaga huleelay ayaga oo aan nabadeey ku oran Xaaji Doolaaal.
Markii Warsame iyo odayaashii tageen ayuu Xaaji Doolaal u yeeray Idil oo qolkeeda ku jirtay u na dhagtaagaysay waxa dhici doona iyo hooyo Caasho, waxa uu na u sheegay in uu nimankii runta u sheegay Idil na uusan siinayn Warsame sidaasna hawshaasi ku dhammaatay. Idil waxa ay aabbeheed u sheegtay in uu khaldan yahay ayna tahay in ninkii gabadhiisu u keensato uu u guuriyo. Balse Xaaji Doolaal go’aankiisi ayuu ku adkaystay. Maamo Caasho ayaa Idil ku tiri “hooyo waa runtaa aabbahaa waa uu khaldan yahay laakiin iska samir oo taladiisi raac kolley waa aabbe oo gabadhiisa mustaqbal ifaya ayuu la doonayaaye.” Idil oo murug iyo ciil la soo darseen ayaa tiri “haye hooyo.” Qolkeedi ayayna halhaleen ku gashay.
Warsame markii uu gurigiisi tagay ayuu Idil soo wacay u na sheegay wixii uu aabbeheed kala kulmay waxa uu na waydiiyay sida ay u aragto go’aanka aabbeheed. Idil waxa ay Warsame u sheegtay in aabbeheed khaldan yahay waxa uu ku kacayna yihiin waxa dabamarsan dhaqanka soomaaliyeed iyo diinta Islaamka. Idil iyo Warsame waxa ku ballameen in aysan ka noqon go’aankooda in ay nolosha wadaagaan reerna unkaan si kastaba aabbeheed ha u diida’e.
Warsame waxa uu arrintii u bandhigay culimada diinta. Waxa uu u tagay wadaad Imaam ka ahaa masaajidka xaafaddiisa ku yaallay waxa uu na u sheegay in uu gabar u geedfariistay balse aabbeheed u diiday asaga oo ku sababeeyay in aysan reerkiisa iyo reerkooda iska guursan. Wadaadkii waxa uu Warsame ku yiri “Warsame waan ku aqaannaa waxaa tahay wiil Islaam ah salaada oo sooma, sidaas darteed gabdha aabbeheed wax daliil ah u ma haysto in uu gabadhiisa kuu diido, maadaama aad sharaftay gabdhiisana sidii dhaqanka iyo diintu qabeen waydiisatay haddaba hortiisa ayaad ku mehersan kartaa haddiiba gabadhu ku rabto.” Warsame waxa uu wadaadkii waydiiyay in uu asagu gabadha ku mehrin karo. Wadaadkiina waxa uu u sheegay in uu ku mehrinayo haddii uu keeno caddayn ah in gabadha uu u geedfariistay oo aabbeheed u diiday. Warsame waxa uu wadaadii siiyay taleefan nambarka Xaaji Doolaal ku na yiri adiguba wac ama toos ugu tagtay.
Wadaadkii waxa uu wacay Xaaji Doolaal maalin kadib na waxa ay ku kulmeen masaajidka wadaadkiina waxa uu Xaaji Doolaal u sheegay in uu Warsame ka socdo. Xaaji Doolaal waxa uu wadaadkii u sheegay in uusan gabadhiisa siinayn Warsame maadaama aysan labada reerood iska guursan. Wadaadkii waxa uu Xaaji Doolaal xasuusiyay in go’aankiisu khilaafsan yahay diinta Islaamka waxa uu na u sheegay in Warsame buuxiyay dhammaan shuruudihii gabar lagu siin lahaa balse Xaaji Doolaal go’aankiisi ayuu ku adkaystay.
Wadaadkii Warsame ayuu wacay u na sheegay in odaygu go’aankiisi diidmada ku adkaystay sidaas darteed na uu fasax u yahay in uu gabadha guursado.
Warsame iyo Idil waxa ay ku ballameen in ay isguursadaan oo aysan go’aanka Xaaji Doolaal dhag u dhigin.
Warsame xaafad Islii ku taalla ayuu guri ka soo kiraystay waxa uu na dhigay dhammaan agabkii aqal aroos ah la dhigi jiray.
Ugu dambayn Idil iyo Warsame waxa ay guddoonsadeen in ay galab jimce ah is mehersadaan habeenkeeda na gurigooda cusub u hoydaan.